मैले देखेको दक्षिण बंगाल (यात्रा संस्मरण)
हामी नेपालीहरुलाई कोरोना कहरको लामो फुर्सद खासै फुर्सद जस्तो नलागेर हिन्दुहरुको महान चाड वडादसैँको ५ दिने छुट्टी निकै महत्वपूर्ण र अर्थ बोकेको रहन्छ । मेरो पनि संयोगवश यस पटक भारतको पश्चिम बंगाल राज्य घुम्ने र दसैँ मनाउने अवसर जुट्यो । दशमीको भोलिपल्ट इटहरीबाट काकडभिट्टा मेची पुल हँुदै भारतको पानीट्याङ्की जाने क्रममा मेची पुलमा सुरक्षा निकै कडा पारिएको महसुस गरँे । नागरिकता, पासपोर्ट वा भोटरकार्ड र कोरोना भ्याक्सिन लगाएको कार्ड अनिवार्य लिएर जानुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । सोहीअनुसार यात्राको श्रीगणेश गरियो ।
२०७८ असोज ३० गते पानी ट्याङ्कीबाट भारतको पश्चिम बंगालको जलपाइगुडी वानरहाट चिया स्टेट भन्ने ठाउँमा मेरो मामाघर थियो । सोही स्थानका लागि बिहानको ११ बजे बसको टिकट लिएर यात्रा सुरु गरियो । मैले यात्रा गरेको स्थान वानरहाटसम्म थियो । रोचक कुरा के छ भने मैले यात्रा गरेको स्थानमा वा त्यो भूगोलमा जहाँ जहाँ गएँ, ढुक्कसँग नेपाली बोल्दा सबैले बुझ्ने र बोल्ने रहेछन् । चाहे त्यो त्यस ठाउँको आदिवासी जनजाति होस्, बंगाली होस् वा अन्य मुलुकका मानिस, नेपालीभाषी अत्याधिक रहेको पाइयो । बसमा यात्रा गर्दा त्यस वसका ड्राइभर र सहयोगीले गरेको सम्मान, यात्रीलाई गरेको सत्कार उदाहरणीय देखेँ । पानी ट्याङ्कीबाट चालसा यात्रामा हिँडेकी बुढीआमा झुक्किएर वानरहाटनजिक पुग्नुभएछ । त्यसपछि बसका ड्राइभर र सहयोगीले अर्को बस खोजेर गाडीमा बसाएर पैसा तिरिदिएर ती बुढी आमालाई गन्तव्यसम्म पुर्याएर उनीहरुले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे । निकै राम्रो र सहयोगी मनहरु पाउँदा बसमा यात्रा गरेका सबै यात्रीहरु खुसी देखिन्थे । ४ घण्टा लामो बसको यात्रापछि जलपाइगुडी जिल्लाको बानरहाट बजारमा पुगियो । बानरहाटदेखि सानो भेनमार्फत् कटलगुडीतिर यात्रा सुरु भयो ।
१ घण्टा ३० मिनेटको यात्रापछि गन्तव्यनजिक पुगियो । सिटी रिक्सालाई त्यहाँको लोकल भाषा टोटो भन्दा रहेछन् । ३० मिनेटजति यात्रा गरेपछि कटलगुडी पुगियो । कटलगुडीमा बग्ने खोला खानावर्ती वारि भारतको पश्चिम बंंगाल जलपाइगुडी र त्यहीँ खोलाको पारि भुटानको गाउँ,पहाडी भेग पर्दो रहेछ । भुटानमा अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावत बन्द भएकोले भुटानको यात्रा गर्ने रहर हुदाँहुदै पनि जान सकिएन । भारतमा २८ स्टेट प्रत्येक प्रान्तको आफ्नो आफ्नो नियम कानून तथा कर्तव्य र अधिकार छन् । म पश्चिम बंगालको जलपाइगुडी जिल्लाको कुरा गर्न गइरहेको छु । पश्चिम बंगालमा मात्र लगभग ९ करोड अर्थात् नेपालको भन्दा ३ गुणा बढी जनसंख्या रहेको तथ्याङ्क पाइन्छ । त्यहाँको प्रमुख आयस्रोत चिया र काठ रहेको पाइन्छ । भौगोलिक दृष्टिकोणमा चुरे क्षेत्र, पहाड र तराई रहेका मुख्य बासिन्दा आदिवासी, मधेसी, नेपाली, बंगाली र भाषाका रुपमा औपचारिक भाषा बंगाली र हिन्दी, अन्य भाषा नेपाली भाषाका रुपमा प्रयोग भएको पाइयो ।
पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी हुन् जो कांग्रेस इण्डियाबाट पार्टी फुटाएर चुनावबाट भारी मतले जितेर मुख्यमन्त्री भएकी हुन् र अहिलेसम्म सत्तामै रहेकी छन् । भारतका अन्य राज्यजस्तै त्यहाँ पनि रासन कार्डमार्फत् प्रत्येक भारतीयलाई खानका लागि चामल,आटा, चिनी, तेलजस्ता अनिवार्य चिजहरु सरकारको तर्फबाट प्रत्येक घरलाई उपलब्ध हुन्छ । आजभोलि कोरोना कहरका कारण प्रत्येक व्यक्तिलाई ५के.जी चामल र आटा थप गरिएको थियो । प्रत्येक विद्यार्थीलाई स्कुलका तर्फबाट ३ के.जी चामल थप गरिएको रहेछ । सरकारी विद्यालयमा प्रत्येक विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक, स्कुलमा खाना, खाजा र किताब दिनुका साथै प्रत्येक विद्यार्थीको बैङ्कमा खाता खोलिदिने , ८ कक्षा पास गरेपछि छात्रालाई १ वटा साइकल, १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, +२ पास गरिसकेपछि त्यसभन्दा माथि पढ्नका लागि रु ६० हजार लोन, १० कक्षा पास गरेपछि ल्यापटप किन्न १० हजार दिने वा ल्यापटप उपलब्ध गराइदिने सम्पूर्ण काम स्थानीय गाउँ पञ्चायत र प्रान्तले गरेको रहेछ । जलपाइगुडी जिल्लामा जताततै चिया बगान सम्पूर्ण रुपमा सरकारको स्वामित्वमा रहेछ । चिया बगानमा काम गर्ने कामदारलाई सरकारले आवासको व्यवस्था गरिदिएको रहेछ ।
सम्पूर्ण कामदारलाई खानाका निम्ति रासन कार्डमार्फत् दाल,चामल,आटा चिनी, तेल, नुन उपलब्ध गराइदिने, स्वास्थ्यका लागि ५ लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा सरकारको तर्फबााट गरिदिने गरेको छ । मुख्य चार आवश्यकताहरु खाना, आवास, शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले जनतालाई उपलब्ध गराइदिएपछि त्यहाँका जनता सरकारसँग खुसी छन् । प्राय नेपाली मुलका जनता बसोबास गर्ने वानरहाटमा खान र बस्नलाइ समस्या नरहेको स्थानीय बताउँछन् । नेपालीभाषीहरुको बाहुल्य भएको ठाउँमा नेपाली परम्परा र संस्कृति मान्ने गरेको पाइन्छ । प्रत्येक नेपालीहरुको चाडपर्वहरु यता नेपालमा जस्तै त्यहाँ पनि हर्षोल्लासका साथ मनाउने, नेपालमा आउने, नेपालका आफन्त इष्टमित्र उता जाने, दुःख सुखमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यहाँका जनता चियाबगानमा काम गर्दछन् । चिया टिप्ने, दबाइ लगाउने, नयाँ नर्सरी लगाउने, गोड्ने, प्याक गर्नेजस्ता काम गर्न १६ वर्षदेखि ६० वर्षका मानिसलाई अवसर दिइने रहेछ । सम्पूर्ण चियाबगान सरकारी भएको हुनाले त्यहाँ काम गरेपछि उपदान, पेन्सन पाउने व्यवस्था रहेछ । ६० वर्ष पूरा गरेपछि एकमुष्ट पैसा आउने र प्रत्येक महिना पेन्सनका रुपमा पैसा आउने, वृद्धभत्ता ६० वर्ष पूरा भएपछि १००० पाइने । यो सबैले गर्दा त्यहाँ बसोबास गरेका वृद्धवृद्धा खुसी देखिन्छन् ।
प्राय सबैको घरमा एक दुईवटा गाई, बाख्रा र परेवा देखिन्छन् । व्यावसायिक हिसाबमा होइन, दुधको चिया पिउनका लागि मात्र । दुध बेच्ने चलन नै रहेनछ । गाई फुकाया,े छोडिदियो, बेलुका आफैँ घरमा आउने रहेछन् । चियापत्ति गाइले नखाने हुँदा कसैको घरमा करेसाबारी हुँदैन । दाल, खाना, अचार, रोटी, पुरी त्यहाँको मुख्य खाना रहेछ । मासु प्राय सबैले खाने, बंगालीहरुले माछा औधी मन पराउने हुँदा माछा, मासुको राम्रो खपत भएको देखियो । प्रत्येक घरमा प्राय माछाबिना खाना नखाने, कटलगुडी चिया वगानका स्थानीय नेपालीभाषी केदार भट्टराईले बताउनुभयो । चिया बगानमा काम गर्ने कामदारको एक दिनको न्यूनतम तलब दुई सय रुपैयाँ हुने र आफूलाइ इच्छा लागेको दिन काममा नजाँदा केही फरक नपर्ने स्थानीय कामदार बताउँथे । ‘हप्तामा २ दिन काम गर्दा खान पुग्छ भने अरु दिन किन जानु ? आनन्दले बस्ने हो ।’ स्थानीय भन्छन् ।
प्रत्येक भारतीयले अहिले खेप्नुपरेको समस्या पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्यवृद्धि रहेछ । नेपालको पैसासँग तुलना गर्ने हो भने लगभग १ लिटरलाई १८० रुपैयाँ पर्न आउँछ । प्रतिलिटर भारु ११०। रहेछ । म गएको पश्चिम बंगाल जलपाइगुडी जिल्लामा खाना पकाउने एलपी ग्यास पाउन बिजुलीको मिटर पाउनजस्तो सम्पूर्ण कागजात चाहिँदो रहेछ । सरकारी कार्यालयमा गएर निवेदन दिएर १ महिनामा १ वटा ग्यास सिलिण्डर मात्र उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेछ । एक परिवार एक ग्यास सिलिण्डर महिलाको नाममा लिँदा पैसा केही प्रतिशत फिर्तासमेत गरिदिँदो रहेछ । २० वर्षभन्दा माथि १ परिवारको २ छोरीलाई विवाह गर्दा पश्चिम बंगालको सरकारले विवाह गरिसकेपछि कागज पेस गर्दा विवाह खर्च भारु २५०००। गाउँ पञ्चायतले उपलब्ध गराउँदो रहेछ । सरकारी हस्पिटलमा लगेर बच्चा जन्माउँदा सुत्केरी यातायात खर्च ५०००। र सुत्केरी स्याहार, बच्चाको पौष्टिक आहार महिनैपिच्छे पाउने प्रावधान पश्चिम बंगाल सरकारले गरेको पाइयो ।
पश्चिम बंगाल जलपाइगुडी जिल्ला वानरहाट कटलगुडी टी स्टेटको ४ दिन लामो बसाइमा त्यहाँका स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने मौका मिल्यो , प्रत्येक महिनाजस्तो हिन्दू, मुसलमान, क्रिश्चियन, आदिवासीहरुको कला, संस्कृति र परम्पराअन्तर्गत चाडपर्वहरु आइरहन्छन् । सबैको सबैले सम्मान गर्दछन् । सबै धर्म, समुदाय एक आपसमा मिलेर बसेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । राजनैतिक रुपमा त्यस क्षेत्रमा मुख्यतः ३÷४ वटा पार्टीको (राजनैतिक) चर्चा परिचर्चा सुनियो । पहिलो भा.ज.पा.(भारतीय जनता पार्टि), सी.पी.आई.(कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया), सी.पी.आई.एम.(कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया माक्र्सवादी), भारतीय कांग्रेस पार्टी आदि । अहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकाल हो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा त्यहाँका स्थानीय जनता खुसी नै छन् तर अलि बढी साम्प्रदायिक, धार्मिक सरकार भयो यो हिन्दू, मुसलमान, क्रिश्चियन, इसाई विभिन्न धर्म मान्ने सबैको विशाल भारत हो । राजनीतिले धर्म प्रतिको आस्थामा चोट पुयाउँन हुदैन । सबै धर्मप्रति समान दृष्टिले राज्यले हेरोस् । अनि सबैलाई आफ्नो सरकार र देशप्रति झन वफादार र इमान्दार बनाउँछ । त्यही भएर सरकार अब आउने चुनावमा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरुको सिट बढ्ने र भाजपाको सिट घट्ने अनुमान एक स्थानीयले लगाए ।
म एक नेपाली । रहर रेल चढ्ने थियो । रेल चढ्दा नि रमाउनुपर्ने हाम्रो आफ्नै किसिमको संस्कृति छ । वानरहाटबाट सिलगुडी सम्मको टिकट काटियो भारु ५० मा र ८ वटा स्टेसन पार गर्दै वानरहाटबाट नागाराकटा, डामडिम, चालसा, मालबजार, वडलाबारी, नागराकोट, सेवक हुदै सिलिगुडिसम्म ३ घण्टाको रेलको यात्रा अनुभव लिने मौकाको भरपूर सदुपयोग गरियो । पाकेटमारको अनुभव लिन पाइएन । चाय, चटपटे, गरम समोसा यात्राको क्रममा लिएर पहिलो रेलयात्राको अनुभव बटुल्दै सिलिगुडीबाट फेरि पानीटङ्की सम्मको बस यात्रामार्फत् आएर मेची पुलवारि आइपुग्दा आफ्नो देश आइपुगियो भने मनको हर्षलाई बढाउँदै, हाँस्दै यात्रालाई अविस्मरणीय यादको रुपमा मनमुटुभित्र लगेर ताल्चा लगाएँ । चाहिएको बेला मनको साँचो खोल्ने वाचासहित यात्रा समाप्त भयो ।